Telegram na -enweta ụdị ọhụụ nke nwere drafts na ndị ọzọ | Androidsis
Telegram emelitere na drafts n'ígwé ojii, ihe ọkpụkpọ vidiyo ọhụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ
Oge ọ bụla nkwalite Telegram na-abịarute, a na-adọrọ obere ihu ọchị na ihu anyị maara na anyị ga-enwekwu atụmatụ iji nweta ahụmịhe onye ọrụ ka mma. The otu n'azụ ngwa a maara hapụ mmelite dị ezigbo mma na onye ọ bụla n’ime ha na-abịa na ụfọdụ akụkọ na-egosi ihe kpatara ya ji nwee ike ịme ihe karịrị otu ụjọ, gụnyere WhatsApp niile dị ike.
Ugbu a, na mbipute 3.10, ọ gụnyere ihe ọhụrụ na-atọ ụtọ maka oge ndị ahụ anyị nwere ike ịchọpụta na anyị na-ede ozi, mana etinyere anyị etiti na anyị ga-ahapụrịrị ya. Site na nsụgharị ọhụrụ a a gụnyere na ozi ndị a na-emechabeghị ga-ahụ na ndepụta nkata na onye nwere ozi ezighi ezi ga-akwaga n'elu. Na ihe ọzọ, a ga-emekọrịta drafts niile na ngwaọrụ gị niile. A oké mma na-abịa na ọtụtụ ndị ọzọ dị ka video player na ndị ọzọ.
1 Na oghere nke ebili mmiri
2 Otu melite ngwa
Na oghere nke ebili mmiri
Ọ bụ n'usoro njirimara a ka Telegram na-achịkọta ndị ọrụ na ndị ọzọ na ngwa gị na na ọdịiche dị na ngwa ndị ọzọ. Ọ dịka ụdị amamihe ahụ bụ onye ịga n’ihu ma ndị ọzọ na-eso. Ma ọ bụ na, site na atụmatụ a, ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka ọ bụ obere ihe, ọ nwere ike ibute nrụpụta ka mma yana na anyị nwere ike ịchekwa onwe anyị ịghara ịmeghachi otu ozi ahụ anyị dere n'etiti.
Yabụ ugbu a ị nwere ike ide na ekwentị gị, nke mere na mgbe etinyere gị, ị ga-esi n'ụlọ wee nwee ozi ederede ahụ na PC gị ka i wee mechaa ma zipụ ya ngwa ngwa. Ga - ahụ ozi ederede a n'igwe ojii nke ọma site na ndepụta nke mkparịta ụka na obere ọkwa na uhie ma ọ ga - apụta n'elu ndepụta ahụ.
Obere nkọwa ndị ọzọ, ewezuga ọkpụkpọ vidiyo ọhụrụ, bụ nke ọhụrụ agụghị ozi tebulu. Site n'otu windo mkparịta ụka ahụ na mkparịta ụka ọ bụla ị nwere, ewezuga inwe ike iji akara ngosi ụzọ mkpirisi iji gbadata na mkparịta ụka ahụ, a na-egosikwa otu mpempe akwụkwọ na-egosi anyị ozi niile agụghị na nke ahụ, ya mere, anyị ga-adị gụọ. Otu n'ime mmụgharị ndị ahụ na-eme ka ogo nke ahụmịhe ọrụ nke Telegram nyere.
Mechaa anyị nwere ike video ọkpụkpọ na ọ nata mmezigharị na imewe yana na mgbe anyị na-egwu vidiyo ọ ga-apụta na ihu zuru oke. N'ụzọ nke a, Telegram ana achi achi na anyị enweghị ọbụna ịhapụ ngwa ahụ iji nwee ọ optionsụ na ọtụtụ nhọrọ ntanetị.
Otu melite ngwa
Dị ka m kwuru ná mmalite, mmelite ọ bụla Telegram na-ewetara anyị na-abịa na a nnọọ akpali ozi ọma. Ihe ikpeazu anyi nwere bu ike dezie posts, bots na akwụkwọ mmado na mbipute 3.8.0 o supergroups na usoro iji kwụsị spam n’ime ha ọnwa 4 gara aga.
Ngwa nke m ga-achọ ịmata ọnụọgụ ndị ọrụ na-abanye kwa ọnwa mgbe ndị 100 nde ahụ na-arụsi ọrụ ike na Telegram n'onwe ya mere ka anyị mara ọnwa 4 gara aga ma tinyekwa ozi ịntanetị a dị ka otu n'ime ọdịnihu nwere na ihe ndị ọzọ na-eto. O nwedịrị ike ịnweta WhatsApp iji nweta batrị ndị ahụ na-enwetakwa ọtụtụ akụkọ na ngwa nke Mark Zuckerberg nwere nke ọ hụrụ na Durov dị ka nke a ga-esi n'ike mmụọ nsọ wee soro akụkụ nke njirimara ya.
Ọ bụrụ na i webeghị oge iji wụnye ya, ị gaghị efu ihe ọ bụla, ma e wezụga ịmara na ị ga-ahụ ọtụtụ kọntaktị gị na ya arụnyere, ebe ọ bụ na karia ndị na-abanye n'ụgbọ okporo ígwè na ọsọ zuru oke nke Telegram pụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Telegram emelitere na drafts n'ígwé ojii, ihe ọkpụkpọ vidiyo ọhụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ
Mmeghachi omume ga-aga n'ihu na Clash Royale